# Cawad: Muuse Biixi ma aanan kala hadlin arrimo quseeya siyaasad - Get Latest News From Horn of Africa
# Cawad: Muuse Biixi ma aanan kala hadlin arrimo quseeya siyaasad
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 14, 2019
Wasiirka arrimaha dibadda Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay sawir wadajir ahaa oo ay Habeen hore wada galeen Wasiirro ka tirsan Dowladda Federaalka ah iyo Madaxweynaha Maamulka Somaliland.
Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in kulankii Muuse Biixi, wasiirradiisa iyo Wasiirrada dowladda Federaalka ah ku dhexmaray Magaalada Maka ee dalka Sucuudiga aan looga hadlin wax siyaasad la xiriira.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la kulanay madaxweyne Muuse Biixi iyo wafdigiisa intii lagu guda jira Xajka,” ayuu Cawad ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka.
#Muuse Biixi oo difaacay kulankii uu la qaatay wasiirada…
Sawir wadareedka ay ku galeen Magaalada Barakeysan ee Maka ayaa waxaa uu qabsaday baraha bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook,waxaana laga bixinayay falcelin kala duwan.
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani ee Somaliland C/Raxmaan Maxamed Cabdullahi Cirro oo ka hadlay sawirkaas ayaa sheegay in Muuse wixii uu isaga ku caayi jiray uu banaanka ula soo baxay islamarkaana dadka Somaliland ay hadda fahamsanyihiin wixii Muuse ku caayi jiray isaga.
Waxaa uu Cirro sheegay in Soomaaliweyn ay hadda ka muuqato Muuse oo ficil ahaan u sameeyay sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirrada dowladda Federaalka ah ee sawirkaas ka soo muuqday qaarkood ayaa baraha bulshada soo dhigay iyaga oo sheegay in Magaalada Maka sawir wadareedka lagu galay uu yahay mid muujinaya dib u heshiin dhex martay dadka Soomaaliyeed.
#Askari Kenyan ah oo la’yahay kadib weerar ka yimid…
#Ciidamada Soomaaliya oo “soo furtay” dad u…
#Saaxiibada Boris oo Mareykanka loogu diiday in ay tagtay…
5 hours ago 22,213
#Wasiir Bayle: ” dantaa igu qasbeysa inaan idin sheegi…
5 hours ago 88,519
#Lafta Gareen: “Milatariga jooga Koofur…
5 hours ago 3,610
#Axmed Madoobe oo kulan la qaatay…
6 hours ago 222,507
#Taliyaha howlgalka AMISOM oo laga soo…
Aug 20, 2019 25,563